Zimaphi izindlela zokuheha ama-backlink amahle kuwebhusayithi yakho?
Ngingathanda ukuqala lesi sihloko ngencazelo emfushane ye-backlink kulabo abasanda kulesi sihloko. I-backlink iyi-hyperlink engenayo ukusuka kwelinye ikhasi kuya kwelinye. Njengomthetho, isixhumanisi sifakwa embhalweni futhi sibonakala njengombhalo we-anchor. Ngokuchofoza kulo mbhalo, uya ku-athikili yokuchaza noma iwebhusayithi ekhonjiwe kulokhu okuqukethwe. Izixhumanisi ezinjalo ngokuvamile zinikeza abasebenzisi ngolwazi oluwusizo futhi basize abanikazi bewebhusayithi ukuthuthukisa rankings yabo website uma konke kwenziwa kahle.
Lesi sihloko senzelwe ukukufundisa ukuthi ungathola kanjani ama-backlink amahle kuwebhusayithi yakho. Ngingathanda ukukufaka ngamathuluzi okudingayo ukuze uthole ama-backlink angcono kakhulu futhi ukwandise ukufinyelela kwakho.
Akuwona wonke ama-backlink adalwe ngokufanayo. Yingakho kufanele uqaphele kakhulu lapho wakha izixhumanisi kusayithi lakho. Njengomthetho, ama-backlink asetshenziselwa izinhloso ezimbili. Okokuqala ukusiza iwebhusayithi ukuthi ifinyelele ijusi yokuxhumanisa yekhwalithi futhi iphakamise igunya lomkhiqizo kuwebhu. Owesibili ukulimaza ngamabomu izingosi zokuncintisana noma ngokungahlosi.
Ukuhlukanisa kanjani i-backlink ephezulu?
Ngokuvamile, ama-backlink aphezulu kakhulu yiwo aphuma phambili kumawebhusayithi. Zifanele futhi zakhiwe ngokomthetho. Abantu abaningi abaxhumanisa nezindawo ezinhle kakhulu zekhwalithi, kungcono ukuthi isayithi lokusesha isayithi libe ngcono. I-Google izobukela izixhumanisi ezinjalo futhi ibuyiselwe isayithi elixhunyiwe ngezinga eliphezulu futhi idumela elihle. Yilokho okudingayo ukubheka ekuakhiweni kwesixhumanisi.
Noma kunjalo, njengoba ngishilo ngaphambi kokuba zonke izinto zangasese zidalwe ngokulinganayo futhi kamuva kude nazo zonke zizuzisa ngokufanayo. Yingakho abakwa-webmasters kufanele bazi kahle ukuthi yiyiphi i-backlink ephezulu kakhulu.
Ake sibhale ezinye zezici ezibalulekile ze-backlink ephezulu, ephezulu kakhulu:
ehambisana niche yewebhusayithi ekhuthaziwe;
livela kumthombo wewebhu othembekile;
ithumela emgwaqweni wokudlulisela;
kahle ngokushumeka kokuqukethwe kwesayithi;
ayikhokhwa noma ihlelwa kabusha;
linikeza i-PageRank yakho.
Lezi zixhumanisi eziphakeme kakhulu zinzima ukuthola. Yingakho bahlonishwa kakhulu yizinjini nabasebenzisi. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuthola izixhumanisi ezinjalo ezivela emithonjeni ehlukahlukene, hhayi ama-backlink angu-100 avela kwenye indawo ephezulu ye-PR. Khumbula ukuthi i-Google ingase iqaphele uma uzama ukukopela uhlelo.
Yiziphi izindlela ezilula zokuthola ama-backlink aphezulu kusayithi lakho?
Into yokuqala okudingayo ukuyiqonda ukuthi lezi zindlalelo ezidingekayo zakhiwe, azithengi. Isu eliphelele lokusungula isixhumanisi lizosekelwe emsebenzini onzima, futhi yilokho okunye. Yiqiniso, uzochitha isikhathi esiningi ukudala izixhumanisi ngokulinganayo. Noma kunjalo, uzoqiniseka ukuthi izixhumanisi ezinjalo zizokunika imiphumela emihle ehlala njalo.
Kunezindlela ezithile zokuthola ama-backlink esemgangathweni:
Ukuze uthole ama-backlink afanelekile, ungafaka igama lakho nolwazi kumarekhodi aphezulu, ahlelwe ngabantu. Kungenzeka ukuthi kuzodingeka ukhokhe kwenye yalezi zincwadi. Kodwa-ke, ngaphambi kokuxazulula noma yiziphi izinsizakalo zokwakha izixhumanisi, kudingeka uqiniseke ukuthi akuyona iwebhusayithi ye-spammy.
Enye inqubo yokwakha isixhumanisi ewusizo ukuba umbhali wezivakashi. Hlangana ne-blog ehloselwe i-niche futhi ushicilele lapho okuthunyelwe okuthakazelisayo nokuzibandakanya ngezixhumanisi ezingenayo ezikhomba kwisayithi lakho Source .